Iimpawu ezili-15 zokuqala ze-Rheumatic Arthritis | Iimpawu, iziphumo kunye neempawu zekliniki
udinweAmanqaku kwiFibromyalgia I-Fibromyalgia sisifo esinganyangekiyo esibuhlungu esibonelela ngesiseko seempawu ezahlukeneyo kunye neempawu zeklinikhi. Apha unokufunda ngakumbi malunga namanqaku awahlukeneyo esiwabhalileyo malunga nesifo esinganyangekiyo se-fibromyalgia- kwaye ubuncinci ukuba loluphi uhlobo lonyango kunye namanyathelo okuzenzela afumanekayo kwesi sifo. I-Fibromyalgia ikwabizwa ngokuba yi-rheumatism ethambileyo. Imeko inokubangela iimpawu ezinjengeentlungu ezingapheliyo kwiimisipha kunye namalungu, ukudinwa kunye nokudakumba.
Ukutya kunye nokutyaUnomdla kwiimpembelelo zokutya kwimpilo yakho? Apha unokufumana amanqaku kwinqanaba lokutya kunye nokutya. Ngokutya kubandakanya izithako ezisetyenziswa ekuphekeni okuqhelekileyo, amayeza, izityalo zendalo, iziselo kunye nezinye izitya.
Ukuzivocavoca kunye nokuzivocavoca
Iimpawu ezili-15 zokuqala ze-Rheumatic Arthritis
14 / 04 / 2018 /2 Amazwana/i Intlungu engapheliyo, rheumatism/av ubuhlungu
15 Iimpawu zokuqala zeRheumatic Arthritis
Nazi iimpawu ezili-15 zokuqala ze-rheumatoid arthritis ezikuvumela ukuba uqaphele isifo se-rimmum, isifo samathambo kwinqanaba lokuqala kwaye ufumane unyango olufanelekileyo. Ukuxilongwa kwangoko kubaluleke kakhulu ekwenzeni izigqibo ezifanelekileyo ngokubhekisele kunyango, uqeqesho kunye nohlengahlengiso kubomi bemihla ngemihla. Akukho namnye kwaba basebenzi kuthetha ukuba unakho ngokwakho isifo samathambo, kodwa ukuba ufumana ezinye zeempawu, sicebisa ukuba uqhakamshelane nodokotela wakho ukuze ufumane udliwanondlebe.
Ugxininiso ngakumbi kufuneka lubekwe kuphando olujolise kwi-rheumatism kunye nokuphazamiseka kw rheumatic okuchaphazela uninzi -Kungenxa yoko le nto sikhuthaza ukuba wabelane ngeli nqaku kwimidiya yoluntu, Zive ukhululekile ukuthanda iphepha lethu le-Facebook kwaye uthi, "Ewe kuphando ngakumbi kwi-rheumatism."
Ngale ndlela umntu unokwenza ukuba iqela labaguli elingakhathalelwanga libonakale ngakumbi kwaye liqinisekise ukuba inkxaso-mali yophando kuhlolo olutsha kunye neendlela zonyango zibekwa phambili.
ICEBISO: Abantu abaninzi abanesifo samathambo abanamava oko uxinzelelo kwiigloves inokuba luncedo ekulweni iintlungu ezandleni nakwiminwe eqinileyo. Oku kuyasebenza xa usebenzisa iisokisi zokunyanzelwa kwesiko (amakhonkco avulwe kwifestile entsha) ngokuchasene namaqatha aqinileyo kunye neenyawo ezibuhlungu.
I-VIDEO: Imithambo emi-5 yokuHamba kulabo abane-Fibromyalgia (i-Tissue Rheumatism)
Ngaba uyazi ukuba i-fibromyalgia ichongwa njenge-rheumatism yezicubu ezithambileyo? Ukuqaqanjelwa kwezicubu ezithambileyo kunye nezinye iingxaki zongqwabalala zihlala zibangela iintlungu kwimisipha, ukungasebenzi kakuhle kunye nokudinwa. Kwividiyo engezantsi uza kubona iintshukumo ezintlanu kunye nokuzolula okunokukunceda ukunciphisa intlungu, ukuphucula ukuhamba kunye nokwandisa ukuhamba kwegazi kwendawo.
Joyina usapho lwethu kwaye ubhalise kwisiteshi sethu seYouTube (cofa apha) ukufumana iingcebiso zokuzikhulula simahla, iinkqubo zokuzivocavoca kunye nolwazi lwezempilo. Wamkelekile! Kuthetha lukhulu kuthi. Enkosi kakhulu.
Siyazi ukuba imiqondiso yangaphambili yamathambo ingahluka kuye umntu uye komnye kwaye ke ngoko qaphela ukuba ezi mpawu zilandelayo kunye neempawu zekliniki ziyinto eqhelekileyo -Kwaye eli nqaku alinawo uluhlu olupheleleyo lweempawu ezinokuchaphazeleka kwinqanaba lokuqala le-rheumatic arthritis, kodwa kunoko lilinge lokubonisa ezona mpawu zixhaphakileyo.
Zive ukhululekile ukusebenzisa ibhokisi yezimvo engezantsi kwenqaku ukuze ufunde izimvo kwabanye kwaye uphawule eli nqaku ukuba uphosa into -iya kwenza konke okusemandleni ethu ukuyongeza.
Funda: -Imithambo eyi-7 yoQeqesho lweRheumatists
Ukuziva unamandla kwaye uphelelwe ngamandla luphawu oluqhelekileyo olunokwenzeka kuwo onke amabakala esifo samathambo -ngakumbi kwizigaba apho amalungu adumbile kwaye adumbile. Ukudinwa kunokubangelwa kukungalali kakuhle, i-anemia (ipesenti yegazi esezantsi), iziphumo ebezingalindelekanga zamayeza kunye / okanye amajoni omzimba alwa nokudumba.
Oku kulahleka kwamandla okuhlala kwenzeka kwabo bachatshazelwa sisifo samathambo kunokuhamba ngokungaphaya kweemvakalelo kunye nobomi bovakalelo -Oku kunokukhokelela kwimpembelelo yomsebenzi, ubudlelwane, ukuqhuba ngesondo, imveliso kunye nentlalontle.
Joyina iqela le-Facebook «I-Rheumatism - INorway: Uphando kunye neendaba"(cinezela apha) kuhlaziyo lwamva nje olwenziwe kuphando kunye nokubhala kwimithombo yeendaba malunga nale ngxaki. Apha, amalungu anokufumana uncedo kunye nenkxaso-ngalo lonke ixesha losuku- ngokutshintshiselana ngamava abo neengcebiso.
2. Intlungu edibeneyo
Isifo samathambo sibangela iintlungu ngokudibeneyo ngenxa yokuvuvukala okubumba ngaphakathi kwento edibeneyo. Kwinqanaba elisebenzayo loxilongo, indibaniselwano inokudumba kwaye iyicaphukise i-capsule edibeneyo- oku kubangela imiqondiso yeentlungu ezithunyelwa ngqo kwingqondo. Olu hlobo lwe-arthritis lunokubangela umonakalo odibeneyo kunye nomonakalo ohambelana ne-cartilage, amathambo kunye nemigqa.
Uxinzelelo loxinzelelo kumalungu
Isibonakaliso esibonisa isifo samathambo sisifo esibuhlungu kakhulu kunye nentlungu xa idibeneyo icinezelwe. Kungenxa yokuba i-capsule edibeneyo ngokwayo iyacaphuka kwaye ibuhlungu ngenxa yoxinzelelo olonyukayo olubangelwa kukukrala- kuxinzelelo lwangaphandle (ukubetha) ukudibana kuya kuba mnandi kakhulu. Olu thando lubalulekileyo kunye nentlungu kumalungu-ihlala ichukumisa ukukhanya-inokukhokelela kwiingxaki zokulala nokungalali.
Ukudumba kwamalungu kuxhaphake kakhulu kwi-rheumatic arthritis. Ngamanye amaxesha ukudumba kunokuba kuncinci- kwaye ngamanye amaxesha kunokuba kubanzi kwaye kubalulekile. Ukudumba okunjalo kumalungu kungakhokelela ekunciphiseni ukuhamba- kwaye ngakumbi ukudumba kweminwe kungakhokelela kubuchule obufanelekileyo beemoto ukubethwa kunye neeringi ezingasafaneleki.
Oku kunokuba nzima kakhulu, kungonwabisi kwaye kube yingxaki - ngakumbi abo bathanda ukwenza ukunitha, ukukhilosha kunye nezinye womluki.
5. Ubomvu kumalungu
Umbala obomvana unokubakho ngaphezulu kwamalungu xa kufakwe umoya. Ubomvu bolusu ngokujikeleze isixa esimanyumnyezi, njengakwi-rheumatic arthritis, kwenzeka ngenxa yokuba imithambo yegazi inyuka ngenxa yenkqubo yokuvuvukala engaphantsi. Kodwa kubalulekile ukukhumbula ukuba ukuvuvukala kunye nokuvuvukala kufuneka kube kukhulu ngokwaneleyo ukubangela oku kuncitshiswa kwimithambo yegazi ngaphambi kokuba sibubone ngokwenene ubomvu bolusu.
6. Amalungu afudumeleyo
Ngaba ukhe wawabona amajoyina aziva eshushu? Amathambo anje, njengakwisifo samathambo, luphawu lokuqubuka okungapheliyo kunye nokusebenza. Oogqirha kunye noochwephesha bahlala bejonga ubushushu obuhlangeneyo xa bezama ukufumana imbonakalo yento edibeneyo echaphazelekayo nguwe kunye neliphi inqanaba.
Amalungu aya kuqheleka-oko kukuthi, ubushushu buya kunyamalala-xa ukudumba kunye nokudumba kuphucula. Ngamanye amaxesha amalunga ashushu anokwenzeka kwakhona ngaphandle kwesikhumba esibomvu okanye ukudumba ngokudibeneyo.
7. Amalungu aqinileyo
Ukuqina kunye nokudinwa okuqinileyo ziimpawu ezibonakalayo zesifo samathambo. Ngokwesiqhelo, amalungu achaphazeleka yi-rheumatoid arthritis aya kufakwa isisu kwaye aqine ngakumbi ekuseni kunasemva kwemini. Ixesha lokuqina kwekusasa linokusetyenziselwa ukulinganisa ubungakanani bento esebenzayo yokudibana.
Umntu unokulindela ukuba ixesha lokuqina kwentsasa linciphe njengoko iimpembelelo zokuvuvukala zihamba kancinci.
8. Ukuhamba ngokudibeneyo kokungasebenzi kakuhle
Amalungu ahlaselwe ngakumbi ngamalungu esi sifo asebenza ngokuqaqanjelwa kwamathambo- kuya kusiba kuncipha okuhambayo. Kukuqokelelana kolwelo kunye nokudumba kwi-capsule edibeneyo ethintela umda wendalo-kwaye enye ihlala ibona ubuthathaka obunxulumene noko kwiindawo ezichaphazelekayo.
Ukusebenza kwamalungu amade, kunye nokuqaqanjelwa sisifo samathambo kunokukhokelela ekushukumeni kunye nokudibana okungasebenziyo.
Ngokuqhelekileyo - kodwa kungekho rhoqo - i-rheumatoid arthritis iya kuthintela amaninzi amaninzi. I-Classical rheumatic arthritis ichaphazela ikakhulu amalungu amancinci ezandla, izihlahla kunye neenyawo- emva koko macala omabini. Ke ihlala iba ngamadolo, iingqiniba, ihips, amaqatha kunye namagxa anokuchaphazeleka abe nokudumba.
Kuqhelekile ke ukuba amalungu amaninzi achaphazeleke, kodwa kwiimeko ezithile ezinqabileyo kunokubandakanyeka kwamalungu ambalwa. Le yinto ohlala uyibona kwi-juvenile arthritis, umzekelo. Ukuba ngaphezulu kwamalungu amane achaphazelekayo, ibizwa ngokuba yi-polyarthritis- kwaye ukuba lilungu elinye kuphela elichaphazelekayo, ke igama elichanekileyo lale monoarthritis.
10. Ukuncitshiswa kwemoto efanelekileyo
Ngenxa yokusebenza okuncitshisiweyo kunye nentlungu, imoto entle ezandleni inokuchaphazeleka kakubi. Oku kunokuba nzima - ngakumbi kwabo bathanda ukwenza umthungo.
Ukuphulukana kunokuba luphawu lwangoko lokuba isifo samathambo sichaphazele okhalweni, emadolweni, emaqatheni nasezinyaweni. Kodwa njengokuba kusaziwa, ukukhubazeka kunokubangelwa zezinye iingxaki-ezinje ngeentlungu zomzimba, izifo zemisipha kunye neengxaki zokudibana.
Kwisifo samathambo, iintlungu ezidibeneyo, ukuhamba kunye nokudumba kwamalungu kunokubangela umntu abenengxaki yelungu. Akuqhelekanga ukuba intlungu engenazo iintlungu ibe ngumqondiso wokuqala we-rheumatoid arthritis-ngakumbi kubantwana okanye kwiintsholongwane.
12. Ukulungiswa kwezakhiwo zamathambo
Iminwe eqingqiweyo kunye nezandla ezigwenxa? Izihlanganisi zinokwenzakala ngenxa yesifo samathambo esingapheliyo kunye esingapheliyo. Oku kungenxa yokuvuvukala okubanzi okuqhekeza i-cartilage kunye nezicubu zethambo ngaphambi kwexesha. Emva kokufunyanwa kwangoko, unyango lunokugcina usulelo oluyonakalisayo e-bay kwaye luncede ekunciphiseni ukwakhiwa kwamathambo kunye nokutshatyalaliswa okuhlangeneyo.
13. Ukubandakanyeka ngokudibeneyo kokulinganisa
Isifo samathambo sidla ngokuba neziphumo ezihambelana noko Oko kukuthi, amalungu achaphazeleka ngokulinganayo kumacala omabini omzimba. Olu lolunye lweempawu eziqinisekileyo zokuba isifo samathambo siyabandakanyeka. Kuhlala kukho ezinye iimeko ngaphandle kokuqinisekisa umthetho, kodwa kuqhelekile ukuba amalungu achaphazeleke macala omabini- umzekelo kwizandla zombini okanye emadolweni omabini.
Kwimithambo ye-rheumatic, ihlala ihlala (kodwa ingahlali njalo) ibonwa ukuba amalungu amaninzi achaphazelekayo kumalungu omzimba. Ke ngoko, isifo samathambo sibizwa ngokuba yi-symmetrical polyarthritis. Njengoko kwaziwa, ngakumbi ukudibanisa okuncinci ezandleni, iingalo kunye neenyawo ziyachaphazeleka.
Iimpawu zokuqala zesifo samathambo zinokuza ngequbuliso nangobuhlungu - okanye ngokuthe ngcembe banokukuchwechwela. Ekuqaleni, umzekelo, amalungu angachaphazeleka kukudumba okukhanyayo kunye nokungabonakaliyo kunye nokuncipha kokuhamba. Intlungu inokwahluka kakhulu-ukusuka kwintlungu eyenza ukuba wonke umsebenzi ungabinakho ukuqaqanjelwa yimvelaphi. Iimpawu zinokwahluka kakhulu kumntu kumntu.
14. Umsebenzi odibeneyo owonakeleyo
Ngenxa yokuba isifo samathambo sibangela iintlungu, ukudumba kunye nobubele kumalungu achaphazelekayo - ke oku kungakhokelela kunciphiso lwento edibeneyo. Oku kudumba kunye nokunyusa uvakalelo lweentlungu kungakhokelela ekunciphiseni okubukhali kuluhlu lokunyakaza kumalungu-into enokuthi ihambe nzima ngaphaya kokuhamba okuqhelekileyo kubomi bemihla ngemihla, kunye nemisebenzi yemihla ngemihla. Ixesha elingaphezulu, oku kunokuhamba ngaphezulu kokulinganisela kunye nokulungelelanisa.
15. I-anemia (ipesenti esezantsi yegazi)
Ngenxa yokuvuvukala okungapheliyo okwenzeka ngoku sisifo samathambo, umongo uza kuthintela ukukhutshwa kweeseli ezibomvu zegazi ungene egazini. Oku kuthetha ukuba unepesenti esezantsi yegazi xa isifo samathambo sisebenza- kwaye oku kungakhokelela ekudinweni nasekudinweni njengoko kuchaziwe ngaphambili. Akuqhelekanga ukuba ipesenti yegazi iphuculwe ngokukhawuleza xa iimpendulo zomzimba zivutha.
Yintoni onokuyenza ukuba une-rheumatism?
- Bambisana ne-GP yakho kwaye ufunde isicwangciso sokuba ungahlala njani usempilweni kangangoko, oku kunokubandakanya:
Ukuhanjiswa kwe-Neurological for uvavanyo lomsebenzi we-nerve
Unyango ngonyango olugunyazisiweyo loluntu (i-physiotherapist, chiropractor okanye okufanayo)
Yenza ngokwezifiso ubomi bemihla ngemihla (funda ngakumbi malunga nayo apha: Iingcebiso ezi-7 zokunyamezela Ubuhlungu obungapheliyo kunye neFibromyalgia)
Inkqubo yokwenza umthambo (funda: Ukuzivocavoca kwabo baChaphazeleka yiRheumatism)
Zive ukhululekile ukuba nenxaxheba kwimidiya yoluntu
Kwakhona, sifuna ukwenza njalo buza kakuhle ukuba wabelane ngeli nqaku kwimidiya yoluntu okanye ngebhlog yakho (nceda udibanise ngokuthe ngqo kwinqaku). Ukuqonda kunye nokugxila okwandisiweyo ngamanyathelo okuqala kubomi bemihla ngemihla ababonakalayo abachaphazeleka yintlungu engapheliyo, i-rheumatism kunye ne-fibromyalgia.
Ukhetho A: Yabelana ngokuthe ngqo kwi-FB - Khuphela idilesi yewebhusayithi kwaye uyincamathisele kwiphepha lakho le-facebook okanye kwiqela elifanelekileyo le-facebook olilungu lalo. Okanye ucofe iqhosha "lesabelo" elingezantsi ukuze wabelane ngesithuba kwi-facebook yakho.
Enkosi enkulu kuye wonke umntu onceda ukukhuthaza ukuqonda okungakumbi kwe-rheumatism kunye nokuchonga isifo esingapheliyo!
Inketho B: Nxibelelanisa ngokuthe ngqo nenqaku kwibhlog yakho.
Inketho C: Landela kwaye ulingane Iphepha lethu le-Facebook
IPHEPHA ELANDELAYO: -Ufanele uyazi malunga ne-FIBROMYALGIA
Cofa kumfanekiso apha ngasentla ukuze uqhubeke kwiphepha elilandelayo.
Landela i-Vondt.net kwi ITUBE
(Landela kwaye uphawule ukuba ufuna senze ividiyo ngeemithambo ezithile okanye ucacisa ngakumbi imiba YAKHO)
Landela i-Vondt.net kwi FACEBOOK
(Sizama ukuphendula kuyo yonke imiyalezo kunye nemibuzo ngaphakathi kweiyure ezingama-24-48. Sinokukunceda utolike iimpendulo ze-MRI kunye nokunye okunje.)
Ngaba ulithandile inqaku lethu? Shiya umlinganiso weenkwenkwezi
Yabelana ngale posti
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/leddoversikt-USE-THIS-ONE.jpg?media=1648573622 406 722 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2018-04-14 12:10:222021-02-02 19:37:09Iimpawu ezili-15 zokuqala ze-Rheumatic Arthritis
26/11/2019 at 12:27
Enkosi kakhulu ngolwazi olulungileyo noluncedo. Ndityelele okokuqala kwi-rheumatologist ngo-2007, nangokutyelelwa rhoqo ukuza kuthi ga ngoku. Eli nqaku liye landinika ulwazi oluthe kratya kunye nokwazisa okungcono ngesifo sam (isifo samathambo) kunalo lonke utyelelo lwam kwi-rheumatologist kunye. Andazi ukuba ndiyakuhleka okanye ndiyihleke, kodwa enkosi kwakhona ngenqaku elifundisayo.
UNicolay v / akafumani uthi:
02/01/2020 at 18:51
Hayi Eva! Ndonwabe kakhulu ukuva ukuba ulufumene olu lwazi luluncedo. Sisebenzisa uphando xa sibhala amanqaku, kunye neengcebiso ezivela kwiNorway Rheumatic Association (NRF) - ukuze uzive uqinisekile ukuba ulwazi lunemithombo elungileyo. Enkosi ngempendulo entle! Nyakhomtsha!
Ngaba ufuna ukujoyina ingxoxo?
Zive ukhululekile ukufaka igalelo!
Shiya uluvo Rhoxisa impendulo
Idilesi yakho ye-imeyile ayizupapashwa. Imimandla enyanzelekileyo iphawulwe nge *
Gcina igama lam, i-imeyile kunye newebhusayithi kwesi sikhangeli kwixesha elizayo xa ndiphawula.
I-Vondt.net yindawo yezempilo yeeklinikhi yeVondt kwizifo zesifo somzimba eziqhutywa ziingcali zezempilo.
I-Clinics yeWound yinethiwekhi enobungcali, enabalandeli abangaphezu kwama-60000, kwiiklinikhi ezinobungcali bokuphazamiseka kwemisipha. Ungafumana enye yeeklinikhi zethu okanye iklinikhi ecetyiswayo ekufutshane nawe phantsi konxibelelwano lwe- "FUMA CLINIC".
Ngaba ufuna uvavanyo kunye noncedo lwentlungu yakho? Cinezela apha ukubona iikliniki zethu kunye namaqabane.
izigaba Khetha udidi Unyango olulolunye Annet I-Osteoarthritis (Osteoarthritis) Isiraphu ye-Autoimmune impatho IsiNgesi ergonomics udinwe uphando unyawo ukuyifundisa Jikelele Guest Post sosana I-inshorensi yempilo Isifo sentliziyo kunye nesihlunu Head Hip Iimeko zolusu kwamathambo idolo Ukutya kunye nokutya supplements Intlungu engapheliyo Ukudinwa okungapheliyo / ME Amanqaku mfanelo Reader Umbuzo Iyeza Imisipha kunye neMithambo entanyeni Ukugula-luvo Ukuzivocavoca kunye nokuzivocavoca rheumatism Emva ukuphazamiseka Ubonisa amandla Isiyezi kunye neSifo seCrystal Izifo kunye noGonyo elula Ubonisa uqeqesho Akohlulwanga Ukudinwa kunye nokudinwa
Umbutho woNyango: Ngubani ovumelekileyo ukuba anyange nge-acupuncture / unyango ngenaliti ... Iimpawu ezi-6 zokuqala ze-Borreliosis